version 0.2.7 – အီရန် “ရွေးကောက်ပွဲ”
ဇွန်လ 19, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု5comments
နောက်ဆုံးပေါ်အီရန်ရွေးကောက်ပွဲကျေးဇူးတင်ပါသည် google translate မှာ google မှရှထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်ပါပြီ, ဝတ်စုံကိုနောက်လိုက်ဖို့ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ. သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် – သငျသညျယခုသင့် wordpress ကို site ကိုဖာစီရန်သို့မဟုတ်ဖာစီကနေဘာသာပြန်ထားသောရှိသည်ဖို့နိုင်ကြသည်. ရုံအုပ်ချုပ်ရေး interface ကိုသွားပြီးဤဘာသာစကားကို add, ယင်း၏ရိုးရှင်းတဲ့. ဘာမှအသစ်ဖြစ်၏, သေး.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, wordpress မှာ plugin
ဇူလိုင်လ 1, 2009 တွင် 8:12 ညနေ
ပထမကိုယ်ကယ့်ကိုအကြီးအ plugin ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင် :).
ထိုအခါကိုယ့်ကိုယ့်ကိုသင်ဈတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အနည်းငယ် bug ကိုတင်ပြ.
ဘလော့ဂ်ပေါ်ခဲ့လျှင် (WP 2.7.1) ကိုယ့်အတွက်စာမျက်နှာကိုပြသရန်ဆုံးဖြတ် “options ကို -> စာဖတ်ခြင်း” ရှေ့စာမျက်နှာပေါ်တွင် plugin ကိုပြသဆောင်းပါးများကိုမရွေးချယ်ထားသည့်စာမျက်နှာ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့မပါဘဲ url ကိုပြန်ပြောင်းရေးကာနှင့်အတူ).
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျ? php မြန်ဆန်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအအသုံးပြုသူများသည်ထက်တစ်နေရာရာမှာသို့မဟုတ်သင့်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအတွက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် (http://aciddrop.com/php-speedy/) ကပိတ်ထားရပါလိမ့်မယ်, ပေါင်း “transposh.js” အဆိုပါလျစ်လျူရှုစာရင်းထဲတွင်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “စမ်းသပ်ခြင်း configuration များ” ထို့နောက်သူကကိုပြန်လည်အသက်သွင်း😉 .
ငါကို Global ဘာသာပြန်ဆိုသူစမ်းသပ်ပြီးင့် (http://www.nothing2hide.net/wp-plugins/wordpress-global-translator-plugin/) ထိုသို့လွန်းကို Google Translator အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပါပေမယ့်တကယ့်လိုက်တယ်င်, ဘာသာပြန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်…
ကိုယ့်သင့်ရဲ့ plugins ကိုသို့မဟုတ်ဤတဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါအဘယ်ကြောင့်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက်တူညီနေကြသည်မဟုတ် ? ကမ္တာ့ဘာသာပြန်ချက်မှအဘာသာပြန်ချက်ဥစ္စာထက်အနည်းငယ်ပိုကောင်းဖြစ်ဟန် :$ .
ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကျိန်းသေယင်း၏ထက်ဥစ္စာကဲ့သို့အခမဲ့အကငျြ့ကိုထောကျပံ့ဖို့ပိုနှစ်သက် “လိုလားသူ” ဗားရှင်း.
ဇူလိုင်လ 1, 2009 တွင် 10:05 ညနေ
မှတ်ချက်များများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအားဤအကြောင်းအရာသည် add ပါလိမ့်မယ်.
ကွဲပြားခြားနားသောအော်တိုဘာသာပြန်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း, Transposh တိုတောင်းအစိတ်အပိုင်းများသို့စာသားကိုချိုးနှင့်ထိုဘာသာကတည်းက, အစားပိုမိုရှုပ်ထွေးပစ္စည်းများ – ဘာသာပြန်ချက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်, ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ကဒီအချက်ပေါ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းငှါအနာဂတျမှာပိုမိုရှုပ်ထွေး segment ကိုကိုင်တွယ်ဖြည့်စွက်၏အစီအစဉ်ကိုပြုပါ.
mohammad Hassan ကပြောပါတယ်
ဇူလိုင်လ 15, 2009 တွင် 11:19 ညနေ
ငါသည်လည်းသင်တို့အဘို့အရိုသေလေးစားမှုရှိသည်, ငါ plug ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဖာစီ add ကျေးဇူးပြုပြီး
အခြားဘာသာစကားများမှဖာစီကနေဘာသာပြန်ဆိုသည့် sidebar မှာပေါ်သင့်ရဲ့အလံပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့်ဤမှတ်ချက်ကိုဘာသာပြန်ဆို
ဇူလိုင်လ 16, 2009 တွင် 3:46 ညနေ
ကိုယ်ကဒီ plugin ကို အသုံးပြု. တာနဲ့ကိုယ့်တစ်ဦး option ကိုသံဖြူသည်ဤ plugin ကို add ကြိုက်တယ်
whene စာမျက်နှာပြည့်စုံဘာသာပြန်ဆို , ဒီစာမျက်နှာ sitmap.xml မှ add
ဇူလိုင်လ 17, 2009 တွင် 9:59 နံနက်
hi ဈပြီးနောက်ဒီ plgin install2admin ရဲ့ဧရိယာပြပွဲများတွင်နေ့က
စုစုပေါင်း 2125 ဘာသာပြန်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ.
ယခုမူကား 5day ပြီးနောက် uper နှင့်စာသားအချို့ကိုမဟုတ်ဒီနံပါတ်ကိုဘာသာမ
အဘယ်အရာကိုယခု donig နေကြတယ် ?